Ukuthi ngabe sekunesikhathi esingaphezu kweyishumi ebhizinisini noma ususondele ukuqala kwakho, ukuba khona okuku-inthanethi okuqinile komkhiqizo wakho akuxoxeki. Njengoba unehhovisi lezitini nodaka lebhizinisi lakho elingaxhunyiwe ku-inthanethi, kufanele ube nobukhona obuku-inthanethi obuhle abathengi bakho namathemba abangahlanganyela nawo kumkhiqizo wakho. Futhi ukuphela kwendlela ongheha ngayo, ujabule, futhi ukhulise isisekelo samakhasimende akho ku-inthanethi ukuthi ube newebhusayithi ekhangayo, esebenzayo. Ngenhlanhla, uthole ithuba lokukhipha le ngxenye ebalulekile yebhizinisi lakho eqenjini elinobungcweti nelithembekile labasebenza eSemalt.
Ukuhlaziywa kwewebhusayithi kumane kuyisilinganiso kanye nokuhlaziywa kwemininingwane efanelekile ukuqonda ukuziphatha kwezivakashi zesayithi lakho. Ngokusetha idatha efanele, ungenza izinqumo ezinolwazi futhi wenze ukubikezela kwalokho izethameli zakho ezizoba yikhona ngokuzayo. Futhi, uma uhlomile ngale datha, ungahlela futhi udale okuqukethwe okuwusizo kakhulu kubavakashi bakho, futhi, nabo, babe ngamakhasimende athembekile kumkhiqizo wakho.
Kufanele uqaphele idatha ongayidinga ukukala nokuhlaziya ukusebenza kwesiza sakho nezinkomba zokusebenza ezibalulekile ezikhuthaza ukukhula kwakho kwebhizinisi, njengesilinganiso sokuguqulwa kokuthenga, inombolo yezivakashi, amakhasi avakashelwa kaningi, njll. Nangaphandle kokuthola ithrafikhi ephezulu kuwebhusayithi yakho, ngosizo lamathuluzi ahlaziyayo wewebhusayithi, ungahambisa idatha yakho ukufeza izinjongo zebhizinisi lakho.
I-SEO yisifushaniso se-Search Enjiniization, futhi kungukuthuthuka okuqhubekayo kwekhwalithi nenani lethrafikhi kuwebhusayithi yakho ngemiphumela yenjini yokucinga. Njengoba ususungule ukubakhona kwe-inthanethi kwebhizinisi lakho, uzodinga ukudala okuqukethwe okuphoqayo nokufanele okuhehayo, okujabulisayo, futhi okuqinisekisa ababukeli bakho ukuthi bazibandakanye nomkhiqizo wakho. Ngolwazi nokuqaliswa okufanele kwezindlela ezinhle kakhulu ze-SEO, ungadala okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu kakhulu kumakhasi wemiphumela yenjini yokusesha (i-SERPs) nokuheha izivakashi kuwebhusayithi yakho. Ukufika kwezivakashi eziningi kuwebhusayithi yakho, kukhuphula amathuba akho okukholisa abantu abaningi ukuthi babe ngamakhasimende akho.
Nasi isibonelo sendlela izindatshana ze-SEO zikhuphuka ngayo kuma-SERPs, futhi kufanele kube yinjongo yakho yebhizinisi ukukala phezulu ngamagama aphambili afanele ku-niche yebhizinisi lakho.
Isikhundla esiphakeme kunabantu esincintisana nabo futhi uhlanganyele amakhasimende ngokusebenzisa amagama afanelekile wemisila emide. Okuqukethwe okubandakanya ukuzibandakanya okukhulu nokuphakeme kukunika umphetho lapho amakhasimende namathemba ngokufanayo afuna okuqukethwe okuxazulula izinkinga zawo.
Kungani Khetha uSemalt?
Siyaqonda ukuthi ukubaluleka kwebhizinisi lakho online kubaluleke kangakanani kubathengi bakho futhi, okubaluleke kakhulu kulayini wakho ophansi. Lapho uzosebenzisana nathi, sikuqinisekisa ukuthi akunandaba nesipiliyoni sakho esibi nezinye izinhlangano zedijithali, sizinikezele futhi sizibophezele ekushintsheni ukulandisa. Ungathatha isinyathelo esinesibindi namuhla sokuthola isabelo esihle semakethe sabathengi namathemba ku-niche yakho noma ngabe ungakanani ngeminyaka noma usayizi webhizinisi lakho.
Ochwepheshe bethu abanethalente basendaweni yakho futhi bathinte u-24/7. Ibanga akusona isithiyo. Ulimi alusona isithiyo futhi. Thintana nathi namuhla.
Ngabe namanje awukheki ukukhulisa ibhizinisi lakho ngenxa yezinkinga zezimali noma ezinye izinto? Sinikeza izinhlelo zamanani entengo ezivumelanisiwe ezenziwe ngendlela efanele isabelomali sakho. Siphinde futhi sikunikeze izisusa eziningi zokubambisana nathi, futhi singakujabulela ukuba yingxenye yendaba yakho yempumelelo yebhizinisi.
I-Semalt yisikhungo esigcwele esigcwele esisebenza ngabantu abanamakhono abanikelwe ekukhuleni okuphezulu kanye nokusebenza kwewebhusayithi yakho. Ochwepheshe ezicini ezahlukahlukene zokukhulisa ubukhona bebhizinisi eliku-inthanethi, ungaqiniseka ukuthi uthole amathalenta amahle kakhulu imali ongathenga ngayo, noma ngabe singengakanani isabelomali sakho. Simboziwe ibhizinisi lakho. Siphathe amaphrojekthi amaningi esikhathini esidlule, futhi ngezansi impendulo evela kwelinye lamakhasimende ethu amaningi, ajabule futhi anelisekile.
Akunandaba yobudala noma usayizi webhizinisi lakho, ungashaya izimbangi zakho emidlalweni yazo ye-SEO. Vele uthole amagama asemqoka okushayela ithrafikhi yakho futhi uwasebenzise endaweni yakho, uwashaye kumdlalo wawo. Ungalilahli ithemba ngezinjongo zebhizinisi lakho.
Yiziphi Izinsizakalo Esizinikezwayo?
At Semalt, inhloso yethu eyinhloko ukukhulisa ubukhona bakho online. Futhi zonke izinsuku, sizibophezele ekwenzeni ibhizinisi lakho libe ngcono. Lezi izindlela ezibalulekile esikusiza ngazo ukufeza izinjongo zebhizinisi lakho.
Eminyakeni eyishumi edlule, siphelelise isheke lethu lamagama angukhiye we-Semalt ne-Web Analyzer ukukusiza:
Bheka ukuthi iwebhusayithi yakho ihlela kanjani kuma-SERPs.
Khomba amaphutha okusebenziseka ekhasini lakho lewebhusayithi yakho.
Hlola ukusebenza kwewebhusayithi yakho
Vuselelwa, nemibiko ebanzi yewebhusayithi ebanzi.
Ngaphandle kokunikeza lezi zinsizakalo ebhizinisini lakho, sinikezela ngezinsizakalo zokusebenziseka kuwebhusayithi eziqinisekisa ukuthi uthola imiphumela oyifunayo yebhizinisi lakho. Iwebhusayithi yakho nokuqukethwe kuzoba phezulu ngaphezu kwezimbangi zakho phakathi nesikhathi esifushane kunazo zonke onquma ukusebenzisana nathi.
Ngensizakalo yethu yokuhlaziya iwebhusayithi esebenza ngempumelelo, uzohlinzekelwa ngemininingwane efanelekile ukufeza izinhloso zakho zebhizinisi ezisethiwe. Bheka ukubuyekezwa kwamakhasimende ethu ngenkonzo yethu yokuhlaziywa kwewebhusayithi.
Izinsizakalo ze-Semalt ze-Semalt
Sinikeza amakhasimende ethu izinsizakalo ze-SEO kungakhathalekile amabhajethi awo noma osayizi bebhizinisi. Siyaqonda ukuthi udinga izinsizakalo ze-SEO ukukhulisa ubukhona bakho be-inthanethi ukukhulisa isisekelo samakhasimende akho nokushayela imali engenayo, ngakho-ke sidale amaphakheji ama-SEO amabili ahambelana nezidingo zebhizinisi lakho.
Ungathola imiphumela emihle ngesikhathi esifushane kakhulu uma uthenga iphakethe lethu le-AutoSEO namuhla. Ngamanani anciphiswe kakhulu ka- $ 0,99, uzobe uthola imali yangempela yezinsizakalo ze-SEO ezenziwe ngalezi zinto:
Ukwenza ngcono ukubonakala kwewebhusayithi yakho
Ukusebenziseka kwekhasi lakho wonke amakhasi kuwebhusayithi yakho.
Ukwakha amasistimu wokwakha isixhumanisi afanele wewebhusayithi yakho.
Ucwaningo lwamagama angukhiye ku-niche yebhizinisi lakho
Ukuhlaziywa kweWebhusayithi kukusiza ukusetha izinjongo zebhizinisi lakho.
Siyaziqhenya ngokunikeza ibhizinisi lakho nezinsizakalo ezifanele zokukhula. Nasi isimemezelo sekhasimende esanelisekile mayelana nephakethe lethu le-AutoSEO.
Ungaqala futhi ukukhula ibhizinisi lakho namuhla ngephakethe lethu le-AutoSEO. Sikunikeza insiza enhle kakhulu ye-Whitehat SEO service ngemali ongayithenga.
Ngephakethe lethu le-FullSEO, uqinisekiswe izinsizakalo ezihamba phambili ze-Whitehat SEO ezizokusiza ukuthi ubeke kangcono kunabantu oncintisana nabo nganoma yisiphi isikhathi. Sebenzisana nathi namuhla ukunikeza ibhizinisi lakho amandla akhulayo e-inthanethi ukukhulisa ulwazi lwakho lwe-inthanethi. Nazi ezinye zezinsizakalo zamasu we-SEO athuthukisiwe enzelwe ukukhulisa ibhizinisi lakho:
Ukusebenziseka kwewebhu yangaphakathi nangaphandle
Ukuphoqelela izinsizakalo zokubhala okuqukethwe
Izinhlelo zokwakha izixhumanisi eziphelele
Ngemuva kokuthengisa nokwesekwa kwezinsizakalo.
Akudingeki uhlehlise ukubeka imali ekukhuleni kwebhizinisi lakho kusabelomali esilandelayo. Sishayele namhlanje ukuze ufunde kabanzi mayelana nezinhlelo zethu zokukhokha eziguquguqukayo eziqinisekisiwe zokuqalisa ukukhulisa idumela lakho lomkhiqizo ku-inthanethi.
Sinechwepheshe abanamakhono nabazinikele abanolwazi lokwakha amavidiyo abiwa online kanye nokungaxhunyiwe ku-inthanethi. Ufuna namavidiyo azothokozisa futhi ahehe ababukeli bakho ukuthi bazibandakanye nebhizinisi lakho. Ithimba lethu lokukhiqiza amavidiyo linolwazi ekwenzeni izinto ezejwayelekile zivelele. Udinga amathalente amahle kakhulu ukukhombisa amakhasimende akho ukuthi ibhizinisi lakho lingabasiza kanjani. Ukuphela kokufanele ukwenze ukusinikeza ucingo namuhla, futhi sizoguqula imibono yakho sibe ngamavidiyo amangalisayo wokuphromotha azokutholela imiphumela.
Iwebhusayithi yakho, njengehhovisi lakho elingaxhunyiwe kwi-inthanethi, kufanele yakhiwe ngobuchwepheshe ukuheha ithrafikhi esebenzayo. Uyaqonda ukuthi le ngxenye yebhizinisi lakho ingenza noma yephule ibhizinisi lakho. Ngakho-ke, kufanele uvumele ochwepheshe baphathe ukuthuthukiswa kwewebhusayithi yebhizinisi lakho. Ngolwazi lwethu lweminyaka engaphezu kweshumi ekusebenzeni kwamaphrojekthi osayizi abahlukahlukene, ungaqiniseka ukuthi iphrojekthi yakho yokuthuthukisa iwebhusayithi isezandleni ezinhle. Silikhathalela kakhulu ibhizinisi lakho, futhi sizibophezele ekutholeni imiphumela yebhizinisi oyifisayo.
Zonke izici zokuthuthuka kwewebhusayithi yakho zinakekelwa ngendlela efanele yithimba lethu elizinikele labasebenzi. Ukusuka kumasu wokwenza uhlobo lomkhiqizo kuze kube ukwenziwa ngokuphelele, siyajabula ukukwazisa ukuthi sithole imiphumela emihle kakhulu yemikhiqizo ephezulu emhlabeni jikelele. Bheka ubufakazi obuvela kumakhasimende ethu athembekile futhi uxhumane nathi namuhla.
Hlangana ne-Semalt Yakho Encane Kakhulu!
Isilwane sethu esisendlini, iTurbo, besiyingxenye yeqembu lethu kusukela ekuqaleni. Ube yilungu elibalulekile lomndeni wakwaSemalt. NjengoTurbo, nathi singaba yingxenye yendaba yakho yempumelelo yebhizinisi. Kungakhathalekile ukuthi isigaba sakho sokukhula kwebhizinisi, singakujabulela ukusebenzisana nawe ukufeza izinhloso zebhizinisi lakho.
Thintana nathi namuhla. Iqembu lethu elinobungane nelizinikele labasebenzi bethu lijabule ukuphendula yonke imibuzo yakho ngokuthi singakhulisa kanjani ubukhona bomkhiqizo wakho ku-inthanethi. Ingabe ukhathazekile ngomgoqo wolimi? Siyajabula ukukwazisa ukuthi abaphathi bethu bakhuluma ulimi olujwayelekile nawe. Kungaba amaShayina, amaNgisi, amaFulentshi, amaNtaliyane, amaDashi, amaTurkey, njll. Sishayele namuhla, futhi ake siqale ukukhulisa ubukhona bebhizinisi lakho online.